Iyo Apple Watch 2 inokwikwidza yakanangana neGear S3 kubva kuSamsung | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch 2 ichafanirwa kukwikwidza yakanangana neGear S3 kubva kuSamsung
Apple's Keynote yatove kuziviswa munaGunyana 7 na19: 00 manheru, nguva yepeninsula kuSpain. Iyi Keynote inofanirwa kuisa mucherechedzo pamberi nepashure pekufamba kweApple mukati megore rinotevera uye ndizvozvo zvigadzirwa zvinoratidzwa Ivo vane basa rekuwedzera kutengesa uye pamwe naro purofiti yekambani.
Sezvaunenge uchitoziva, muna Nyamavhuvhu Samsung yakaratidza yayo inotevera mureza, iyo Samsung Galaxy Cherechedzo 7 ine iris kuzivikanwa uye akawanda mamwe nhau uye nhasi ndipo pachauya iyo Galaxy Gear S3, inotevera vhezheni yeiyo smartwatch yekambani iyo inosvika mazuva mashoma Apple isati yafungidzirwa Apple Watch 2.
Nhasi iyo IFA 2016 muBerlin. IFA ndeimwe yeakanyanya kukosha matekinoroji akaitirwa muEurope uye mune iyi kesi kuGerman. Imwe yedzidziso dzakakosha masikati ano ichave yeiyo inotevera Samsung wachi, iyo Gear S3, kuti iyo yekuSouth Korea inogadzira yakatotaura kare mukukoka kwayo.
Iyi nyowani Gear S3 inouya panguva yakakodzera kukwikwidza yakanangana neinofungidzirwa Apple Watch 2 izvo zvinosvika pa7th neiyo iPhone 7 yeavo vanobva Cupertino. Apple chokwadi yaisa basa rakawanda rekuona kuti iyo inotevera modhi yayo smartwatch iri kusvika kunguva, asi chatinofanira kujekesa nezvacho ndechekuti Samsung ichaedza kutsausa kutarisa kune wachi yayo.
Kusvika parizvino, iyo Galaxy Gear dzakasiyana idzo dzakapihwa hadzisati dzasvika pakubata kuzere kune vashandisi uye ndezvekuti kutengesa kwaro kwakaderera kwazvo kana tikazvienzanisa neizvo Apple yakwanisa kutengesa yayo Ikozvino Apple Watch. Tichange takateerera kune dzese nhau dzakapihwa masikati ano kukwanisa kuzvienzanisa neiyozvino Apple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch 2 ichafanirwa kukwikwidza yakanangana neGear S3 kubva kuSamsung
Iyo Apple Watch 2 inogona kuunza sarudzo dzekuchengetedza
Zano: gwaro vhezheni manejimendi mune macOS Sierra